ကှယျလှနျသှားပီဖွဈတဲ့ လူတဈယောကျကို လကျမနှဈခုနှငျ့ ခွမေနှဈခုကို ကွိုးခညျြထားတာ ဘာကွောငျ့လဲ…? – Nyi Ma Lay
ကှယျလှနျသှားပီဖွဈတဲ့ လူတဈယောကျကို လကျမနှဈခုနှငျ့ ခွမေနှဈခုကို ကွိုးခညျြထားတာ ဘာကွောငျ့လဲ…?
By Nyi Ma LayPosted on September 18, 2021 September 18, 2021
လူတဈယော ကျသလြှေငျ လကျ မနှဈခုနှငျ့ ခွမေနှဈခုကို ကွိုးခညျြထား တတျသညျ။ ဘာကွောငျ့မှနျးမသိခဲ့ပါ။ ထုံးစံအရ လုပျသညျဟုသာ နားလညျထား၏။
ဟိုတုနျးက ဆရာတျောတဈပါးဟောကွားသော တရားကိုနာရငျး ဤအကွောငျးကို သိခှငျ့ရခဲ့သညျ။ ဟုတျသညျဖွဈစေ မဟုတျသညျဖွဈစေ နားထောငျရငျး သဘောကမြိသညျ။ ဓမ်မမိတျဆှမြေား အကြိုးရှိနိုငျ သညျ့အတှကျ ဖျောပွလိုကျပါသညျ။
တဈခါတုနျးက လယျပိုငျရှငျသူေ ဌးတဈေ ယာကျဆီမှာ အခစား လုပျသညျ့ သူရငျးငှားတဈယကျေရှိသညျ။ နစေ့ဉျလု ပျနသေျောလညျး ကွီးပှားတိုးတကျွ ခငျးမရှိ၍ စိတျပကျြနလေေ၏။ တဈနေ့၌ စဉျးစားမိ၏။ လယျပိုငျရှငျထံ လယျေ တာငျးမညျ။ ကိုယျပိုငျ လယျလုပျခှငျ့ရလြှငျ စီးပှားရေး အဆငျပွနေိုငျသညျ။
“သူဌေး … သူဌေးမှာ မကျြစိတဈဆုံး လကျညိုးထိုးမလှဲ လယျတှအေ မြားကွီးပါ။ ကြှနျတေျာ့မှာ လယျတဈကှကျေ တာငျမရှိဘူး လယျတဈရှငျ စာလောကျပေးပါ။” လယျတဈရှငျစာ ဆိုတာ နှားနှ ဈကောငျနှငျ့ တဈမိုးတှငျး လုပျကိုငျလောကျတဲ့ မွကေိုပွောတာပါ။
သူဌေးက သူရငျးငှားကိုကွညျ့ပွီး သနားသှားပါတယျ။
“မငျးလိုခငျြသလောကျ ငါပေးမယျ။ ရော့ ဒီမှာ ငုတျတဈခြောငျး … ရော့ ဒီမှာ တုတျတဈခြောငျး … ဒီကနသှေားပါ။ မငျးလိုခငျြသလောကျ လယျမွကေိုေ ရာကျရငျ ငုတျကို တုတျနဲ့ရိုကျပွီး မှတျထားခဲ့။
ငုတျအတှငျးကို မငျးပိုငျတဲ့ မွအေဖွဈ မှတျထားခဲ့။” သူဌေးစ ကားဆုံးတော့ သူရငျးငှားခမြာ ဘယျလောကျဝမျးသာမလဲ စဉျးစားကွညျ့ပါ။ တုတျနဲ့ငုတျကို ကိုငျပွီး … ခပျသှကျ သှကျလြှောကျ သှားပါတယျ။
ပွီးတော့ နောကျပွနျ ကွညျ့လို ကျပါတယျ။ စိတျထဲမှာလညျး တှေးလိုကျပါတယျ။ “နညျးသေးတယျ” ဟူ၍ ဖွဈပါသညျ။ ငါလမျးလြှောကျတာ နှေးလို့ဖွဈမယျဆိုပွီး မပွေးရုံတမယျ သှားပွနျပါတယျ။
“နညျးသေးတယျ” ဟူ၍ပငျ ဖွဈပါသညျ။
မိမိရပွီးသား ဥစ်စာမြားနှငျ့ နောကျထပျရမညျ့ ပစ်စညျးဥစ်စမြားကို တဏှာမကျြလုံးနှငျ့ကွညျ့လြှငျ အဖွကေ တဈခုတညျး ဖွဈပါသညျ။
မိုးလငျးမှ မိုးခြုပျ တကုပျကုပျနဲ့ မမောနိုငျမပနျးနိုငျ ရှာဖှနေေ ကွခွငျးသညျ တဏှာက ခိုငျးလို့ဖွဈပါသညျ။ မိုးခြုပျလို့ စာရငျးသိ မျးပွီး “နညျးသေးတယျ” ထပျရှာဦးမယျ တှေးခွငျးသညျ တဏှာ၏ သတ်တိဖွဈပါသညျ။
ဘုရားမသှားနိုငျ ကြောငျးမတ ကျနိုငျအောငျ ခိုငျးနတော တဏှာပငျဖွဈသညျ။ တရားမနာနိုငျအောငျ ခုနှဈရကျမြှ တရားအားမ ထုတျနိုငျအောငျ တရားအတှကျ အခြိနျမပေးနိုငျအောငျ ခိုငျးနတော တဏှာဖွဈ၏။
ရကျကွီးအခါကွီးမှာ အမြားသူငါ ကုသိုလျတှပွေုလို့……။
ဒါတှကေို မွငျသျောလညျး … ဒီရကျက ဈေးရောငျးလို့ ပိုကောငျးတယျဆိုပွီး ဘုရားကြောငျးကနျ မကျြနှာလှဲတာ တဏှာကွောငျ့ဖွဈသညျ။ သူရငျးငှားက နညျးသေးတယျအတှေးနဲ့ ငုတျနဲ့ တုတျကိုမွမှောခြ ခါးတောငျးကို မွှောငျအော ငျကြိုကျပွီး တုတျနဲ့ ငုတျကိုကိုငျပွီး ပွေးပါတော့တယျ။
ပွေးရငျးပွေးရငျး အမောဆို့ပွီး လယျကှကျတဈခုထဲကို မှောကျလဲသှားပါတယျ။ ကူမညျ့သူမရှိဘဲ မှောကျလဲနတေော့ ပါးစပျထဲ နှာခေါငျးထဲမှ ရဝေငျပွီးသသှေားပါတယျ။
အတျောကွာမှ လယျပိုငျရှငျက _
“ဟေ့ သူရငျးငှား လယျယူဖို့သှားတာ ပွနျလာတာမတှသေ့ေးဘူး လာလိုကျကွစို့” လို့ အနီးရှိ လူမြားချေါပွီး လိုကျကွညျ့ပါတယျ။ လယျကှကျထဲမှာ မှောကျလဲသတော တှတေ့ော့ စိတျမေ ကာငျးစှာနဲ့ ဘေးကလူတှကေို ပွောပါတယျ။
ငါက လယျမွတှေကေို လိုသလော ကျပေးတယျ သူက ခွောကျပပေဲယူသှားတယျ ပွောပွီး… မွမွေုတျဖို့ ခွောကျပတှေငျး တဈတှငျးတူးခိုငျးပါတယျ။ တှငျးတူးနတေုနျးမှာ မှောကျခုံကွီး သနေတေဲ့ သူရငျးငှားကို ပကျလကျလှနျ လိုကျပါတယျ။
လကျထဲက တုတျနဲ့ ငုတျက ပွုတျမထှကျဘဲ ကိုငျထားမွဲ ဖွဈနပေါတယျ။ လယျပိုငျရှငျက သသေခြောခြာကွညျ့ပွီး အလောငျးကို တှငျးထဲမခခြငျ တုတျနဲ့ ငုတျကို သူရငျးငှား လကျထဲမှ ဖွုတျလိုကျပွီး ကွိုးတဈခြောငျးနဲ့ လကျမနှဈခြောငျးကို ပူးခညျြလိုကျပါတယျ။
ဘေးကလူတှကေ လယျပိုငျရှငျကို ဘာလုပျဖို့ခညျြတာလဲလို့ မေးတော့ လယျပိုငျရှငျက ပွနျမဖွသေေးဘဲ ခွမေနှဈခြောငျးကို ပူးပွီး ကွိုးနဲ့ခညျြပွနျပါတယျ။
ပွီးမှ ဘေးကလူတှကေို ရှငျးပွပါတယျ။
“တုတျနဲ့ ငုတျကိုငျပွီး ညညပွေးနမှောစိုးလို့ ခွမေနဲ့ လကျမကို ကွိုးခညျြထား တာပါလို့” ဖွလေိုကျပါတယျ ………။
မကွာခဏ ဆိုသလို မိမိကိုယျကို ပွနျမေးသငျ့တဲ့ မေးခှနျးလေး တဈခုရှိပါတယျ။ နငျပွေးနတေုနျးလား ? ငုတျရိုကျနပွေီလား ? ဆိုတာပါပဲ။
( ဓမ်မဒူတ အရှငျပညာဝရ )
လူတစ်ယော က်သေလျှင် လက် မနှစ်ခုနှင့် ခြေမနှစ်ခုကို ကြိုးချည်ထား တတ်သည်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိခဲ့ပါ။ ထုံးစံအရ လုပ်သည်ဟုသာ နားလည်ထား၏။
ဟိုတုန်းက ဆရာတော်တစ်ပါးဟောကြားသော တရားကိုနာရင်း ဤအကြောင်းကို သိခွင့်ရခဲ့သည်။ ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ နားထောင်ရင်း သဘောကျမိသည်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေများ အကျိုးရှိနိုင် သည့်အတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
တစ်ခါတုန်းက လယ်ပိုင်ရှင်သူေ ဌးတစ်ေ ယာက်ဆီမှာ အခစား လုပ်သည့် သူရင်းငှားတစ်ယေက်ရှိသည်။ နေ့စဉ်လု ပ်နေသော်လည်း ကြီးပွားတိုးတက်ြ ခင်းမရှိ၍ စိတ်ပျက်နေလေ၏။ တစ်နေ့၌ စဉ်းစားမိ၏။ လယ်ပိုင်ရှင်ထံ လယ်ေ တာင်းမည်။ ကိုယ်ပိုင် လယ်လုပ်ခွင့်ရလျှင် စီးပွားရေး အဆင်ပြေနိုင်သည်။
“သူဌေး … သူဌေးမှာ မျက်စိတစ်ဆုံး လက်ညိုးထိုးမလွဲ လယ်တွေအ များကြီးပါ။ ကျွန်တော့်မှာ လယ်တစ်ကွက်ေ တာင်မရှိဘူး လယ်တစ်ရှင် စာလောက်ပေးပါ။” လယ်တစ်ရှင်စာ ဆိုတာ နွားနှ စ်ကောင်နှင့် တစ်မိုးတွင်း လုပ်ကိုင်လောက်တဲ့ မြေကိုပြောတာပါ။
သူဌေးက သူရင်းငှားကိုကြည့်ပြီး သနားသွားပါတယ်။
“မင်းလိုချင်သလောက် ငါပေးမယ်။ ရော့ ဒီမှာ ငုတ်တစ်ချောင်း … ရော့ ဒီမှာ တုတ်တစ်ချောင်း … ဒီကနေသွားပါ။ မင်းလိုချင်သလောက် လယ်မြေကိုေ ရာက်ရင် ငုတ်ကို တုတ်နဲ့ရိုက်ပြီး မှတ်ထားခဲ့။
ငုတ်အတွင်းကို မင်းပိုင်တဲ့ မြေအဖြစ် မှတ်ထားခဲ့။” သူဌေးစ ကားဆုံးတော့ သူရင်းငှားခမျာ ဘယ်လောက်ဝမ်းသာမလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ တုတ်နဲ့ငုတ်ကို ကိုင်ပြီး … ခပ်သွက် သွက်လျှောက် သွားပါတယ်။
ပြီးတော့ နောက်ပြန် ကြည့်လို က်ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း တွေးလိုက်ပါတယ်။ “နည်းသေးတယ်” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ငါလမ်းလျှောက်တာ နှေးလို့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး မပြေးရုံတမယ် သွားပြန်ပါတယ်။
“နည်းသေးတယ်” ဟူ၍ပင် ဖြစ်ပါသည်။
မိမိရပြီးသား ဥစ္စာများနှင့် နောက်ထပ်ရမည့် ပစ္စည်းဥစ္စများကို တဏှာမျက်လုံးနှင့်ကြည့်လျှင် အဖြေက တစ်ခုတည်း ဖြစ်ပါသည်။
မိုးလင်းမှ မိုးချုပ် တကုပ်ကုပ်နဲ့ မမောနိုင်မပန်းနိုင် ရှာဖွေနေ ကြခြင်းသည် တဏှာက ခိုင်းလို့ဖြစ်ပါသည်။ မိုးချုပ်လို့ စာရင်းသိ မ်းပြီး “နည်းသေးတယ်” ထပ်ရှာဦးမယ် တွေးခြင်းသည် တဏှာ၏ သတ္တိဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားမသွားနိုင် ကျောင်းမတ က်နိုင်အောင် ခိုင်းနေတာ တဏှာပင်ဖြစ်သည်။ တရားမနာနိုင်အောင် ခုနှစ်ရက်မျှ တရားအားမ ထုတ်နိုင်အောင် တရားအတွက် အချိန်မပေးနိုင်အောင် ခိုင်းနေတာ တဏှာဖြစ်၏။
ရက်ကြီးအခါကြီးမှာ အများသူငါ ကုသိုလ်တွေပြုလို့……။
ဒါတွေကို မြင်သော်လည်း … ဒီရက်က ဈေးရောင်းလို့ ပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီး ဘုရားကျောင်းကန် မျက်နှာလွှဲတာ တဏှာကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူရင်းငှားက နည်းသေးတယ်အတွေးနဲ့ ငုတ်နဲ့ တုတ်ကိုမြေမှာချ ခါးတောင်းကို မြှောင်အော င်ကျိုက်ပြီး တုတ်နဲ့ ငုတ်ကိုကိုင်ပြီး ပြေးပါတော့တယ်။
ပြေးရင်းပြေးရင်း အမောဆို့ပြီး လယ်ကွက်တစ်ခုထဲကို မှောက်လဲသွားပါတယ်။ ကူမည့်သူမရှိဘဲ မှောက်လဲနေတော့ ပါးစပ်ထဲ နှာခေါင်းထဲမှ ရေဝင်ပြီးသေသွားပါတယ်။
အတော်ကြာမှ လယ်ပိုင်ရှင်က _
“ဟေ့ သူရင်းငှား လယ်ယူဖို့သွားတာ ပြန်လာတာမတွေ့သေးဘူး လာလိုက်ကြစို့” လို့ အနီးရှိ လူများခေါ်ပြီး လိုက်ကြည့်ပါတယ်။ လယ်ကွက်ထဲမှာ မှောက်လဲသေတာ တွေ့တော့ စိတ်မေ ကာင်းစွာနဲ့ ဘေးကလူတွေကို ပြောပါတယ်။
ငါက လယ်မြေတွေကို လိုသလော က်ပေးတယ် သူက ခြောက်ပေပဲယူသွားတယ် ပြောပြီး… မြေမြုတ်ဖို့ ခြောက်ပေတွင်း တစ်တွင်းတူးခိုင်းပါတယ်။ တွင်းတူးနေတုန်းမှာ မှောက်ခုံကြီး သေနေတဲ့ သူရင်းငှားကို ပက်လက်လှန် လိုက်ပါတယ်။
လက်ထဲက တုတ်နဲ့ ငုတ်က ပြုတ်မထွက်ဘဲ ကိုင်ထားမြဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ လယ်ပိုင်ရှင်က သေသေချာချာကြည့်ပြီး အလောင်းကို တွင်းထဲမချခင် တုတ်နဲ့ ငုတ်ကို သူရင်းငှား လက်ထဲမှ ဖြုတ်လိုက်ပြီး ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ လက်မနှစ်ချောင်းကို ပူးချည်လိုက်ပါတယ်။
ဘေးကလူတွေက လယ်ပိုင်ရှင်ကို ဘာလုပ်ဖို့ချည်တာလဲလို့ မေးတော့ လယ်ပိုင်ရှင်က ပြန်မဖြေသေးဘဲ ခြေမနှစ်ချောင်းကို ပူးပြီး ကြိုးနဲ့ချည်ပြန်ပါတယ်။
ပြီးမှ ဘေးကလူတွေကို ရှင်းပြပါတယ်။
“တုတ်နဲ့ ငုတ်ကိုင်ပြီး ညညပြေးနေမှာစိုးလို့ ခြေမနဲ့ လက်မကို ကြိုးချည်ထား တာပါလို့” ဖြေလိုက်ပါတယ် ………။
မကြာခဏ ဆိုသလို မိမိကိုယ်ကို ပြန်မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းလေး တစ်ခုရှိပါတယ်။ နင်ပြေးနေတုန်းလား ? ငုတ်ရိုက်နေပြီလား ? ဆိုတာပါပဲ။
( ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညာဝရ )
Previous post Diamond (စိနျ) အတုအစဈ မိမိ ကိုယျတိုငျ အိမျတှငျ အလှယျတဈကူ ခှဲခွားနညျး
Next post မိမိ နစေ့ဉျအသုံးပွုနတေဲ့ ဖစျေ့ဘုတျအကောငျ့ ကို လုံခွုံရေး ပုံမှနျစဈဆေးဖို့ မပငျြးပါနဲ့….